Phone Case Printer - umkhiqizi, ufektri, umhlinzeki waseChina
(Yonke imikhiqizo engu- 24 ye-Phone Case Printer)
I-Dest Quality Iphrinta ye-Flat Flat
I-Dest Quality Iphrinta ye- Flat Flat yimuphi umbala ingashicilelwa ngokusebenzisa inkinobho enemibala nemhlophe e-UV. I-Dest Quality UV Printer Flatbed iyakwazi ukunyathelisa ngokuqondile ngaphandle kokugqoka ngaphambili, ukushisa noma noma yikuphi ukuthambisa. Iphrinta yethu ifakwe kokuphefumula kwamanzi namanzi,...
I-UV Flatbed Digital Printer
I-UV Flatbed Digital Printer ingaphrinta umbala omhlophe. I-eco UV i-Fatbed Printer ingaphrinta umphumela we-emboss. I-Epson UV Flatbed Printer Price ingaphrinta ngqo ngaphandle kokupenda ngaphambili. Iphrinta ye-Digital UV ephathekayo UV 6060 ingaphrinta ngezinhlobo ezahlukene zezinto: TPU, PC, ABS, PU lesikhumba,...
Isebenza kanjani i-Flatbed UV Printer Work
Umsebenzi we-Flatbed UV Printer Owenzelwe amaklayenti adinga isithombe esinyathelisiwe kakhulu futhi ufuna ukubeka izinto eziphrintiwe ngaphandle! Iphrinta ye-UV enezintambo ezizenzelayo enekhwalithi ephezulu ye-infrared ingasebenza kalula. Ngaphansi kokusizwa kombala we-UV ne-inks ezimhlophe, ukubuyekezwa kwe-UV...
I-Long Run iphrinta ephrintiwe ye-UV
I-Long Run iphrinta ephrintiwe ye- UV ingaphrinta ezintweni eziningi zokwakha, ezifana ne-KT ibhodi, Isikhumba, i-Glass, i-Plastic, i-Fabric, i-Metal, i-Bamboo ne-wood, i-Ceramic, i-PVC, i-PP, i-PE, i-ABS ect. Iphrinta ephrintiwe yefomathi ephezulu ye- UV izokhishwa ngaphandle kwezinsuku ezingu-3-5 emva kokuthola...
I-OCE i-Arizona UV i-Printer Flatbed Printer Isitayela ezinhlobonhlobo zemishini, ikakhulukazi esetshenziselwa igobolondo yefoni yeselula, ibhizinesi lebhizinisi u-disk, i-MP3 shell, ukunikezwa kwamandla weselula, u-disk u-hairpin, njll. Uma udinga Abantu, izinkampani, izinkampani zokukhangisa, ukucubungula kwefektri,...
I-Roland UV I-Printer Flatbed Indiya ubuchwepheshe obusha obuvumela ukunyathelisa nge-UV ephilisiwe ngqo kuma-substrates angagqwali. Singahle senze ukunyathelisa kombala omine ngokukhethwa kuka-6 noma 8 kokuphrinta kombala kanye. Siphinde senze [ukunyathelisa okumhlophe ", okuvumela ukuba senze ukuhlanza...
I-UV Flatbed Acrylic Printer
Iphrinta ye-UV Flatbed Acrylic engabizi ingokwalabo i-Sapphire-Jet Pro, okuyi-multi-functional LED UV flatbed printer eyenziwe ngu-Shenzhen Refinecolor technology CO., Ltd. Iphrinta ye-UV ene-Flat A2 Pro yakhiwe ngokucushwa kwezimboni njengephrofayli ye-aluminium ye-thicken, uhlelo lokuphefumula kwamanzi, 100W...
I-UV Flatbed Printer Auction
Isicelo sephrinti ye-UV Flatbed cishe zonke izinhlobo zezinto ezibonakalayo nezithombe zingafakwa ngokuphrinta ngqo. Iphrinta ye-UV ye-UV A3 ingaphrinta izinto ezingu-17cm, ungakwazi ukulungisa ukukhululeka ngokukhululekile, izinto ezingalingani (okungalingani ngaphakathi kwe-2mm) konke kungaphafaza ngokucophelela...
Phone Case Printer phone case printer I-Phone Phone Case Printer I-Android Phone Case Printer Shoes Printer phone shell printer I-Hot Cake Printer I-Coffee Cake Printer